Mgbanwe Post slugs na WordPress maka SEO | Martech Zone
N'oge ụfọdụ mgbe ị na-eme nchọpụta isiokwu mgbe ịde blọgụ maka njikarịcha njin ọchụchọ, ị nwere ike ịchọpụta na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị na-achọ okwu na-asụpe ma ọ bụ na-emekọ ihe ọnụ. Otu ihe atụ nwere ike ịbụ USS Forrestal vesos USS Ochie.
Igosipụta nsonaazụ ọchụchọ maka mkpụrụ okwu okwu edepụtara ede bụ okwu na-arụ ọrụ nke ọma… mana ị nwere ike ọ gaghị achọ ịkọpụtacha okwu ụma na aha post gị ma ọ bụ ọdịnaya gị. Mgbe nile, mmadụ ga-atụ ihe ndudue pụta gị!
Kama ile anya na ị ga-emechu gị ihu, jiri ohere ndị ọzọ na ọdịnaya gị mee ihe ịkọwapụta okwu nke ọma:
your Zipu Post (vidiyo dị n'okpuru)
N'ime aha njirimara na mkpado arịlịka (njikọ).
N'ime aha ma ọ bụ nkọwa mkpado na ihe oyiyi.
Nke a bụ obere vidiyo na esi gbanwee post slug gị na WordPress. Emela nke a mgbe ị bipụsịrị blog, ọ bụ ezie! Mgbe ị na-ede blog post gị, ịnwere ike imelite post slug gị dị mfe:
Tags: ebuliPermalinkslugslugWordPresswordpress permalink
Ihe mere na anaghị m amasị Facebook
Sep 2, 2009 na 4: 26 AM
Ọ dị ka Camtasia nwere ọtụtụ ikike. You zụrụ ngwanrọ ahụ, ka ị na-agba ọsọ ikpe?
Sep 2, 2009 na 12:42 PM
N'ụzọ na-akpali mmasị, ọ pụtaghị na ọ siri ike dịka ụdị 'studio' maka Windows. Ma, ọ bụ Wezuga mfe iji! The interface mimics iMovie budata. Azụrụ m ya oge ọ pụtara. Anọ m na-eji Snap X Pro mana ọ kwuru na ndenye aha m gwụchara… Amaghị m ya bụ ndenye aha! Nke a dị mma karịa.